တောအကြောင်း ပြောမယ်နော့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောအကြောင်း ပြောမယ်နော့ 
တောအကြောင်း ပြောမယ်နော့ 
Posted by တောတွင်းပျော် on Apr 5, 2015 in Creative Writing | 14 comments
ပြီးခဲ့ တဲ့MALAY HARIRAYA (မလေးနှစ်သစ်ကူး) မှာ စခန်းရှိ လူအကုန် အလျှိုလျှိုပြန်ကုန်တော့ထုံးစံအတိုင်း တောတွင်းပျော်တစ်ယောက်တည်း စခန်းစောင့် ကျန်ခဲ့ တယ်။ စခန်းမှာ စက်ယန္တရားတွေ အများကြီးမို့အစောင့် မရှိလို့ မရ။ နောက်ပြီး တောတွင်းပျော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း မြို့ ပေါ်တက်ချင်စိတ်မရှိ။
စခန်းမှာ အိပ်စားအိပ်စားနဲ့ကင်းခရလည်း မနည်းဘူးပဲ။
တောနက်ခေါင်ခေါင် အင်တာနက်လိုင်းမရှိ၊ ဖုန်းလိုင်းမရှိပေမယ့်အပြင်ဖက် ကမ္ဘာနဲ့ တော့အဆက်အသွယ်တော့မပြတ်။ နေ့ ရော ညပါ ခေါင်းပေါ် ဖြတ်ဖြတ်ပျံနေတဲ့လေယာဉ်တွေက တောတွင်းပျော်ရဲ့အပြင်ကမ္ဘာပဲ။ ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာ ဖြေရှင်းမရသေး၊ရှာမတွေ့ နိုင်သေးတဲ့မလေးရှား
AIR LINE က MH370 လေယာဉ်တောင်မှ တောတွင်းပျာ်တို့တခူးခူးတခေါခေါ အိပ်ပျော်နေချိန် တောတွင်းပျော်တို့ အပေါ်က ဖြတ်ပျံပြီး နာရီပိုင်းလောက်မှာ အဆက်ပြတ်ခဲ့ တာ။ ဘီဂျင်း၊ ကွာလာလမ်ပူလ်
လမ်းကြောင်းက တောတွင်းပျော်တို့ ရဲ့ အထက်က။
စခန်းမှာ လူတွေကုန် (တစ္ဆေသရဲတွေတောင်မှလာမလည်တော့ ) တောတွင်းပျော် တစ်ယောက်တည်း ပျင်းခြောက်ခြာက်။ တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ထမင်းတစ်ခါချက် ၃ကြိမ်စား၊ မနက်ကဟင်းကို copyကူး
နေ့ ခင်းဆို စက်ကြီးတွေ welding ဆော်စရာရှိတာဆော်၊ ပြင်စရာရှိတာပြင်။
ညဖက်ကျတော့မီးစက်အင်ဂျင်နိုး လက်တောပ် ကွန်ပြူတာလေးဖွင့် ပြီး ဂိမ်းကစားရင် ကစား၊ ဒါမှမဟုတ် ဗွီဒီယို ကြည့် ချင်ကြည့်ည ၁၁ နာရီ ၁၂ နာရီထိုးအထိ။
စခန်းစောင့်ဒုတိယမြောက်ည….
ထုံးစံအတိုင်း ည ၁၂ နာရီထိုးအထိ ဂိမ်းကစားပြီး မီးစက်ပိတ် အိပ်ယာဝင်ချိန် အဆောင်ခေါင်မိုးကိုမိုးထားတဲ့မိုးကာတာလပတ်ပေါ် မိုးစက်တွေ တဖြောက်ဖြောက်ကျနေလေရဲ့ ။ မိုးစက်သံစဉ်ကို နားဆင်ရင်း အိပ်ပျော်စ မပြုတပြု အချိန်မှာ မိုးစက်သံစဉ် တဖြောက်ဖြောက်အသံကြားက ဂျိုးဂျိုးဂျွတ်ဂျွတ်မြည်သံပါ ရောပါလာတာကြောင့် အကြောအခြင်တွေပျော့ ကျ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားယူတော့ မယ့် ဆဲဆဲ တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် ဆတ်ကနဲ လန့် နိုးလာတယ်။ သိုင်းဝထ္ထုတွေထဲကစကား ငှားသုံးရရင်တော့ 
အန္တရာယ် အငွေ့ အသက်။ ပေါ်လာတဲ့ အသံတွေကို နားစွင့် နေရင်း အိပ်ယာထဲကအသာထလိုက်ရင်း လက်က လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။ (တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ဆိုရင် ဘေးက သေနတ်ကို အသာဆွဲ၊
ကျည်ထိုးမောင်းတင်ပေါ့ ။) ဒါပေမယ့်တောတွင်းပျော်ဘေးမှာ ဘာလက်နက်မှမရှိတာ။ လက်နက်အဖြစ်သုံးလို့ ရမယ့်သံပိုက်လုံးတို့တာယာလီဗာတို့ က ဝပ်ရှော့ ပ်က စတိုထဲမှာ။ ဘေးမှာရှိတဲ့လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကလေးကိုအသာလေးယူပြီး တဲအပြင်ဖက် သတိထားထွက်ပြီး လျှောက်ထိုးကြည့် လိုက်တယ်။
အပြင်ဖက်က မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့်တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ Boss ကို ခြုံရှင်းမယ် အကြောင်းပြပြီး excavator (မြေတူးစက်) နဲ့စခန်း
ပတ်ပတ်လည် မြေတူးမြေဖွလုပ်ပြီးစိုက်ခဲ့ တဲ့အားကောင်းမောင်းသန် မတ်မတ်မားမားပေါက်နေတဲ့ကလောပီနံပင်တွေ တက်တက်စင်အောင် ပြောင်ကုန်လေရဲ့ ။ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပါလိမ့် …….
ဓါတ်မီးကို ဆက်ထိုးကြည့် ရင်း တဲစခန်းရဲ့အနီးဆုံး ငှက်ပျောအုံဆီအရောက် တုန့် ကနဲ ရပ်သွားတယ်။
အာ့ မငေး ငေး….ဘုရား၊ဘုရား…!
မှည့် ရင့် စပြုနေတဲ့ငှက်ပျော်ခိုင်သီးတဲ့ငှက်ပျောပင်အုံနားမှာ မျက်မမြင် ပုဏ်ဏား( ဏပတ်ဆင့် ရေးမရလို့ )
ပုံပြင်ထဲက နံရံကြီးတစ်ခု။ မည်းမည်းကြီးတော့မဟုတ်။ ညိုညစ်ညစ်။
တရားခံကို လက်ပူးလက်ကြပ်မိနေပြီ။ 911 ခေါ်ဖို့ ကလည်း ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်။ ကိုယ်တိုင် ဝင်လုံးပြီး
ဖမ်းလိုက်ရမလား။ ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်။ ကိုယ်ကိုတိုင်ကိုက ခြေချုပ်လက်ချုပ်မိနေသလို လှုပ်လို့ မရ။ လှုပ်လည်း မလှုပ်ဝံ့ ။ ၅ ကိုက်အကွာလောက်မှာသာရှိတဲ့ဒီလို ဧည့် သည်မျိုးကို ညကြီးမင်းကြီး အခုလိုချိန်မျိုးမှာ ရုတ်တရက်တွေ့ လိုက်ရတော့ဘယ်သူပြိုင်လို့ တုန်လှုပ်နိုင်ပါအံ့ လဲ။
ကိုယ်ကလည်း မလှုပ်ဝံ့ သလို၊ သူကလည်း ငြိမ်သက်လို့ ။
ဧကန္တ…! ဒင်း ဆင်ကြံ၊ ကြံနေတာဖြစ်ရမယ်။ ဒင်းက ဆင်ကြံ၊ ကြံရင်းတော့ဘယ်ရမလဲ ဟင်း…ဟင်း!
ဒီကလည်း တောတွင်းပျော်ပဲ။ လူကြံ ပြန်ကြံရတာပေါ့ ။ ခေါင်းထဲ plan တစ်ခု အမြန်ဆွဲလိုက်တယ်။
စခန်းရဲ့တဖက်မှာ စက်ကြီးတွေ အစီအရီိ ရပ်ထားတယ်။ ဟိုမှာက ဘူဒိုဇာ ၄ စီး၊ အနားမှာကပ်ရက်က မြေတူးစက် ၂ စီး၊ နောက်ဒီဖက်နားမှာက သစ်ကား ၄ စီး နဲ့သစ်တင်စက် ၁ စီး။ မဟာဗျူဟာမြောက် ပြေးလမ်း
၃ မိနစ်၊ ၄ မိနစ်ကြာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်တူသဘောတူ ငြိမ်သက်နေကြပြီးမှ တောတွင်းပျော်ဖက်က အရင်လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။ ခြေလှမ်းကို အသာနောက်ဆုတ်လိုက်တာပါ။ ဆုတ်နေတဲ့ကိုယ့် ခြေလှမ်းကို
ပြန်ကြည့် လိုက်တော့ဗွီဒီလိုဖာတ်လမ်းထဲက ကြောင်ကလေး ဂါလ်ဖီးနဲ့တူနေသလိုလို။ အရေးထဲ နားထဲ
စိုးလွင်လွင်ရဲ့သီချင်းတစ်ပိုဒ်ကို ကြားယောင်နေမိသေးတယ်။
သူရဲကောင်းတို့ ရဲ့ နှလုံးသား….
ခြင်္သေ့ဆိုတာ မြက်မစား… မစား…မစား..
ခြေလှမ်းတော်တော်များများ နောက်ဆုတ်ပြီးမှ workshop ဖက်ကို တချိုးတည်းပြေးပြီး မီးစက်ကိုနိုးလိုက်တယ်။
စခန်းတစ်ခုလုံး မီးထိန်ထိန်လင်းသွားပြီ။ ဧည့် သည်ကြီးရှိတဲ့ အနားက မီးတိုင်အလင်းရောင်ကြောင့်ဧည့်သည်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ရှင်းရှင်းမြင်နေရပြီ။ ခေါင်းကတော့ကွယ်နေတုန်း။ ဒင်းက ဆက်ပြီးငြိမ်နေတုန်း။
အကြံရပြီ…! ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံ။
အဆောင်ထဲပြန်ဝင် ဖုန်းကိုပြန်ယူပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး facebook မှာတင်လိုက်လို့ ကတော့ … ဟင်း..ဟင်း
Like တွေ အများကြီးရ၊ comment တွေ အများကြီးရ။ သတ္တိရှိလိုက်တာ လို့ တောင် အချီးမွမ်းခံရအုံးမယ်။
တကယ်တန်း ရိုက်ကြည့် တော့ မရ။ မီးရောင်အောက်ဆိုပေမယ့်ဖုန်းကင်မရာမို့ISO မြင့် မရ။ ဖလက်မီးလည်း မသုံးဝံ့ ။ လက်လျော့ လိုက်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဒင်းက စလှုပ်ရှားလာပြီ။ ဟင်း! ငါ့ငှက်ပျောပင်ကို ဒင်းအုပ်တော့ မယ်။
မဖြစ်ချေဘူး။ တရှုးရှုးတရှားရှား အသံပေးပြီးတော့ လည်း မမောင်းရဲ။ တော်ကြာ ကိုယ့် ဖက်လှည့် လာပြီး ရန်မူမှာကိုလည်း ကြောာက်ရသေးတယ်။ TARZAN တို့ လို တအို့ အို့ တအားအား
အသံပေးလည်း ဒင်းက နားလည်မှာမဟုတ်။ အနားမှာရှိတဲ့SANTAIWONG (သစ်သယ်ကာား) ပေါ်တက်ပြီး
စက်နိုးလိုက်တော့အိတ်ဇောပိုက်ကြီးကထွက်လာတဲ့အသံကျယ်ကြီးကြောင့်ဒင်းလည်း တုံ့ ကနဲရပ်သွားတာ
တွေ့ လိုက်ရတယ်။ တောတွင်းပျော်လည်း အားတက်သွားပြီး လီဗာ နင်းကန်ဖြဲနင်းလိုက်တော့ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့်ဒင်းလည်း ဆင်ကြံ ဆက်မကြံတော့ ပဲ ကိုယ်ကို နောက်ပြန်လှည့်အမြီးလေးတရမ်းရမ်းနဲ့ 
ညကြီးမင်းကြီး ဆင်တစ်ကောင်၊ လူတစ်ယောက်၊ ကားတစ်စီး မြင်ကွင်းကတော့သိပ်ကြည့် လှမှာတော့ 
ဒင်းပြန်လှည့် ထွက်တော့ မှပဲ ဒင်း မျက်နှာကို သေသေချာချာမြင်လိုက်ရတော့ တယ်။ အစွယ်မပါ ဆင်မလေးပဲ။ ညင်ညင်သာသာထွက်သွားပုံလေးက ဆင်မယဉ်သာ လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုး။
ဒင်းထွက်သွားပုံက ကြောက်လန့် လို့ထွက်သွားပုံမျိုးမဟုတ်။ အခြေအနေတစ်ခုမှာ အဆင်မပြေလို့ 
အေးအေးဆေးဆေး ထွက်သွားပုံမျိုး။ ဒီပုံမျိုးဆို ဒင်း နောက်တစ်ခေါက်လာနိုင်သေးတယ်။
မိုးကလည်း တဖွဲဖွဲရွာတုန်း။ တစ်ညလုံးစွေမှာလား မသိ။ ရာသီဥတုကလည်း အေးစိမ့် စိမ့် မို့မီးဖိုထဲ
ပြန်ဝင်ပြီး ရေနွေးတည် OLD TOWN ကော်ဖီမစ်တစ်ထုပ် ဖျော်သောက်လိုက်တော့နည်းနည်းနွေးသွားတယ်။
ဒီညတိုက်ပွဲက အိပ်လို့ ရတော့ မှာ မဟုတ်တော့ ။ စခန်းနဲ့မနီးမဝေးမှာ ခြုံတိုးသံတွေကြားနေရတယ်။ ဒင်း အဝေးကြီးထွက်သွားတာ မဟုတ်။ ကျနော့ ဖက်က အခြေအနေကို စောင့် ကြည့် နေပုံရတယ်။
လှုပ်ရှားမှု စတော့ မယ်။ တောတွင်းပျော် အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်လိုက်တယ်။ မိုးရွာထဲ ထွက်ရမှာကိုး။
အဲ… အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတိုလေးကိုတော့မချွတ်ဘူးနော်။ အကုန်ချွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့တော်ကြာ တောတွင်းပျော်ရဲ့ ပုံစံကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်မိမှာစိုးလို့ ။ ညနက်နက် တောကြီးခေါင်လယ် တစ်ယောက်တည်းဆိုပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့အရှက်သား။ အဟီး…
အပြင်ထွက်၊ SANTAIWONG ၂ စီးကို စောစောက ဆင်မရပ်ခဲ့ တဲ့ငှက်ပျောပင်အုံရှိရာကို မီးထိုးဦးတည်ပြီး
Park လိုက်တယ်။ ဒီနေရာ ဒင်း အသေအချာပြန်လာအုံးမှာ။ ကား ၂ စီးကို park ပြီးတာနဲ့workshop ဘေးက
ကွန်တင်နာစတိုထဲဝင်၊ ဒီထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ဗျောက်အိုးတွေရှိတယ်။ ( ဒီမှာက ဘယ်သစ်စခန်း
မဆို ဒီလို ဗျောက်အိုးလေးတွေကို စခန်းနားကပ်လာတဲ့အကောင်ပလောင်တွေခြောက်ဖို့ဆောင်ထားကြတယ်။ ) ဘောလုံးပုံစံ ဒီဗျောက်အိုးလေးတွေရဲ့ အသံ စွမ်းပကားကို ကော်သူးလေပြည်နယ်မှာ
နေခဲ့ တဲ့တောတွင်းပျော် ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ ။ M-16၊ AK-47၊ MA စီးရီးတို့ ရဲ့ပေါက်ပေါက်ဖောက်သံ
လောက်ကတော့ဒီကောင်လေးက ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်။ တွေ့ ပါပြီ၊ ၄၊ ၅ လုံး။ ဒီဇယ်ဆီမီးပုံးကို မီးညှိပြီး
စနက်ကြိုးကိုမီးရှို့ ။ စနက်ကြိုး မီးတရှဲရှဲလောင်တာနဲ့လွှင့် ပစ်။
ဒင်းကလေးရဲ့စွာကျယ်ကျယ်အသံကြောင့်ဟိုတောထဲကမမလည်း လန့် ပြီးပြေး။ ဟန်ကျနေပြီ။
တကယ်တန်းဖောက်မယ်ကျတော့တောတွင်းပျော် ဗျောက်မဖောက်ဖူးဘူး။ လက်တွန့် နေတယ်။ ဖောက်ရမှာ ကြောက်နေတယ်။ မဖောက်လို့ လည်း မဖြစ်။ လုံခြုံရေးအတွက် ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ကို လုပ်ရမယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် လုပ်အားမပေးချင်ရင်သာရှိမယ်၊ ကိုယ့် မရှိမဲ့ရှိမဲ့တယုတယစိုက်ထားတဲ့ 
အပင်လေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတ္တသွေးကတော့တောတွင်းပျော်မှာ အပြည့် ။
ကြိုးစားရှို့ လိုက်ပါပြီ။ စနက်ကြိုးလည်း တရှဲရှဲ မီးစလောင်နေပါပြီ။ တောတွင်းပျော်လည်း သူငယ်ချင်းတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက် ပြောပြဖူးတဲ့သူ့ ရဲ့ လက်ပစ်ဗုံးပစ်နည်းကို ကြားယောင်ပြီး ဗျောက်အိုးလေးကို ဝေးနိုင်သလောက် အဝေးကိုလွှင့် ပစ်လိုက်ပြီး မျက်စိကိုမှိတ်၊ နားကိုပိတ်ပြီး စိတ်ထဲ အမှတ်
ထောက် ၆…. ထောက်.. ထောက်.. ထောက်.. မပေါက်။
နောက်တစ်လုံး.. ထောက်၊ ထောက်၊ ထောက်… မပေါက်။
နောက်တစ်လုံး။ ရှိသမျှ အလုံးတွေကုန်သွားပြီ။ တစ်လုံးမှ မပေါက်။ ပြန်ကောက်ရှာပြီးကြည့် လိုက်တော့ 
တစ်လက်မကျော်ရှိတဲ့စနက်ကြိုးလေးက ငုတ်စိပဲ ကျန်တော့ တယ်။ ဆက်မရှို့ ရဲတော့ ။ သူတို့ ကို မသုံးခင် နေပူပူမှာ ၂ ရက်လောက်ကောင်းကောင်းလှန်းထားပေးရတာ။
လက်လျော့ တဲထဲပြန်ဝင်ပြီး မီးဖိုဆောင်က တိုင်ကပ်နာရီကြည့် လိုက်တော့မနက် ၂ နာရီခွဲတော့ မယ်။
လောလောဆယ် ချက်ချင်းတော့ပြန်လာအုံးမှာတော့မဟုတ်သေး။ မီးစက်ကိုပိတ်၊ ကိုယ်လက် သုတ်သင်ပြီး အိပ်ယာထဲပြန်ဝင်လိုက်တယ်။ စောစောက သောက်ထားတဲ့ကော်ဖီအရှိန်ကြောင့်အိပ်မပျော်နိုင်တော့ ။
အိပ်ပျော်လို့ လည်း မဖြစ်။
ဖုန်းဖွင့် ပြီး SUDOKU Game ကစားနေလိုက်တယ်။ Game ကစားရင်း နားစွင့် ထား။ တစ်ခါတစ်ခါ အပြင်ထွက်
ဓါတ်မီးကို တရမ်းရမ်း ဟိုထိုးဒီထိုး။ ဒီလိုနဲ့မနက် ၄ နာရီထိုးတော့ မယ်။ လူကသာ အိပ်ချင်စိတ်မရှိသေးတာ။
Game ကစားလို့မျက်စိကျိန်းချင်ချင်။ ဖုန်းပိတ်ပြီး အသာလေးမှိန်း နေလိုက်တယ်။
မိုးကတော့တပေါက်ပေါက်နဲ့ ရွာနေတုန်း။
အိပ်မပျော်တော့အိပ်ယာထဲ ဟိုဖက်စောင်းလှဲ့ လိုက်၊ ဒီဖက်စောင်းလှဲ့ လိုက်၊ ကော်ဖီအရှိန်ကြောင့်အတွေးတွေကလည်း ခေါင်းထဲ ဗျောက်တောက်ဝင်လာတယ်။ ဘယ်အချိန်ပြန်ဝင်လာမယ်မှန်း မသိရတဲ့ 
ဟိုခြုံထဲက တောမမကို မိုးအလင်းဒီလိုစောင့် နေရမယ့် အရေးတွေးပြီး စိတ်ကတိုချင်လာပြီ။ မစောင့် လို့ ကလည်းမရ။ တော်ကြာ အိပ်ပျော်နေတုန်း အအုံ ၂၀ လောက်ရှိတဲ့ငှက်ပျောပင်တွေ ပြောင်သွားလို့ က
ဒုက္ခ။ တချို့ အပင်ကအသီးတွေဆို ခုတ်လို့ ရနေပြီ။ အခုတောင် ကလောပီနံပင်တွေ တစ်ပင်မှ မကျန် တက်တက်စင်အောင် ပြောင်သွားပြီ။
စောင့် ကြည့် နေပေမယ့် သူ့ ဖက်မှာ အခြေအနေက ငြိမ်နေတုန်း။ ဘာလှုပ်ရှားမှုမှမလုပ်။
ဒီလိုနဲ့မနက် ၅ နာရီထိုးတော့ မယ်။ စောစောက ညတိုက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရလို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ စိတ်တွေ
တဖြည်းဖြည်းအနယ်ကျလာပြီး၊ မျက်ခွံတွေက လေးလာသလိုဖြစ်လာတယ်။ အိပ်မပျော်သွားအောင်ကြိုးစားပေမယ့်တချက်တချက် အိပ်မက်တွေကဝင်လာပြန်ရော။ လူကနိုးတစ်ဝက်
ပျော်တစ်ဝက် အနေအထားနဲ့ကိုယ့် ကိုကိုယ် အားတင်းနိုးကြားနေအောင်လုပ်နေတုန်းမှာ ချုံစပ်က
တောတိုးသံသဲ့ ကြားရပြန်ပြီ။ ကိုယ့် စိတ်ကို နိုးကြားနေအောင် သတိထားနေလို့ လားမသိ၊ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ 
နိုးတဝက်ပျော်တဝက်အနေထားကနေ ငေါက်ကနဲ ထထိုင်လိုက်နိုင်တယ်။ ဓါတ်မီးကိုယူပြီး တဲထဲကထွက် မီးထိုးကြည့် လိုက်တော့ဧည့် သည် မမလေးက ခပ်လှမ်းလှမ်းခြုံစပ်ကထွက်မယ်အပြု မီးရောင်မြင်တော့သူ့ ခြေလှမ်းတွေ တန့် သွားတယ်။
သူခိုး လူမိသွားသလိုမျိုး။ တကယ်လည်း ကျနော့ အလစ်မှာ ခိုးစားကြံနေတာကိုး။ ကျနော့ ကို ကြောင်ကြည့်နေပြီး နားရွက်တွေက တဖြတ်ဖြတ်ခတ်လို့ ။ မျက်နှာငယ်၊ မျက်နှာသေလေးနဲ့ … ဟွန့် ။
ဒီလို သူ့ ပုံစံကိုမြင်ရတော့ဒေါသထောင်းကနဲ ထွက်သွားတယ်။ တယ်လည်း.. . လူကို တမင်အိပ်ရေးပျက်အောင် လာနောက်နေသလိုလို။
မိုးက စောစောကလို မရွာတော့ ၊ ခပ်ဖွဲဖွဲလေးသာ ရွာတော့ တယ်။ Workshopက မီးစက်ကို သွားနိုးမနေတော့ဘဲ အသင့် ရပ်ထားတဲ့SANTAIWONG ပေါ်တက်ပြီး စက်နိုး ရှေ့ မီးကြီးတွေ ဖွင့် လိုက်တယ်။
ကားမီးရောင်နဲ့အင်ဂျင်သံ ဆူဆူညံညံကြောင့်တောမမလည်း ရှေ့ ဆက်မတိုးတော့ ။ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက် ဒီတစ်ခါတော့စိတ်လျော့ လိုက်ပြီထင်၊ ကျနော့ ဖက်ကို အတော်ကြာကြာကြည့် နေပြီးမှ
တောထဲပြန်လှည့် ဝင်သွားတော့ တယ်။ မိုးလင်းပေါက်အထိ နိုးနိုးကြားကြား ခုခံတော်လှန်နေတဲ့တောတွင်းပျော်ကို လက်မြောက်လိုက်ပြီထင်။
ဒင်း အပေါက်မှား နှိုက်မိလိုက်လေခြင်း။
အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်ရင် နေ့ နဲ့ ည အမြဲမှားတတ်တဲ့တောတွင်းပျော်အကြောင်း ဒင်းမှတ်ပလား။
နေထွက်လာမှ အိပ်တတ်တဲ့တောတွင်းပျော်အကြောင်း သိပလား။
ကားစက်တွေသတ်လိုက်ပြီး အဆောင်ထဲပြန်မဝင်ဘဲ ကားပေါ်ကနေ အသင့် အနေအထားနဲ့နာရီဝက်လောက်
အသာငြိမ်ပြီး နားစွင့် နေလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့တောမမတစ်ယောက် အဲ .. တောမမတစ်ကောင် စခန်းနဲ့ 
ဝေးရာဆီ ထွက်သွားပြီထင်။ ဟိုခြုံထဲကလည်း ဘာအသံမှမကြားရတော့ ။ စိတ်ချရလောက်တဲ့အနေအထား
ဖြစ်လောက်ပြီမို့ကားပေါ်ကဆင်း အဆောင်ထဲပြန်ဝင်လိုက်ချိန်မတော့အရှေ့ အရပ်က အာရုံပြို့ တော့ မယ်။
အိပ်ယာပေါ်က ခြုံစောင်ပါးလေးကိုယူပြီး Workshop ဖက်ကို ထွက်လိုက်တယ်။ တောတွင်းပျော်မှာက ထုံးစံအတိုင်း နေဖင်ထိုးအောင် အိပ်ဖို့ တာဝန်ကရှိသေးတယ်လေ။ ကားမိုးကာ တာလပတ်မိုးထားတဲ့အဆောင်တဲက နေထွက်လာရင်ပူတာမို့အေးအေးဆေးဆေးအိပ်လို့ ရမယ့်Workshop ထဲက အထပ်သားစင်လေးကို ရှင်းလိုက်ပြီး တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် အိပ်တော့ မယ်။ တညလုံးတာ လှုပ်ရှား
မောပန်းနေတဲ့အကြောအခြင်တွေ အနားပေးလိုက်တော့ မယ်။
နေအုံး၊ နေအုံး… မအိပ်နဲ့ အုံး တောတွင်းပျော်…
အရှေ့ အရပ်က ရောင်နီတောင်အန်ထွက်လာပြီ။ သွားနှုတ်ဆက်လိုက်အုံးလေ…..
သြော်…! ဟုတ်ကဲ့ ၊ ဟုတ်ကဲ့ ပါ။
တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် အရှေ့ အရပ်ဆီ ဟန်ပါပါ မျက်နှာမူရပ်ရင်း မာန်ပါပါ ရင်းခေါင်းသံပါအောင်
( မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါရှင့် ) လေယာဉ်တံခါးပေါက်ဝက ခရီးသည်တွေကို ဦးကြိုနေတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးများအသံဖြင့် ရွက်ပါ။
( မင်္ဂလာရှိသော ရက်မြတ်ပါရှင့်) ကုန်တိုက်က အရောင်းစာရေးမလေးများလေသံဖြင့်ရွက်ပါ။
( မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါခင်ဗျ ) သူဋ္ဌေးဆီ အန်ပေါင်းတောင်းမယ့်အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့လေသံဖြင့် ရွက်ပါ။
တော်ပြီနော်၊ တောတွင်းပျော်လည်း အိပ်တော့ မယ်။
နှစ်သစ်ကို တခူးခူးတခေါခေါ အိပ်ပျော်ရင်း ကြိုဆိုလိုက်တဲ့ 
​တောတွင်း​ပျောဆီ အပျိုလာလှည့်​တာနဲ့တူရဲ့ နှစ်​ခါ​တောင်​ပြန်​လာတယ်​ဆို​တော့ အသီးကလဲမာလိုက်​တာ ။ အပျိုလာလှည့်​တာ နှင်​ထုတ်​ရတယ်​လို့
မိုးများမလင်းရင် ဘယ်နှစ်ကြိမ်များ လာလှည့် အုံးမလဲမသိ။
ဘဝ ဆိုတာ အဆုံးအစ မရှိတဲ့ တောနက်ထဲ
မျက်စိလည် လမ်းမှားနေသလိုပေါ့ ဘယ်အရာ မှ
နှစ်တွေကတော့ အတော့အဟောင်းကနေအသစ် ပြောင်းသွားလိမ့်မယ် လူတွေကတော့ အဟောင်းမှာ ဝေ့လည်လည် ရင်းးးးးး
မှက်ခြက်။ လုမကို တောထဲခေါ် ဆားခြင်သီ။
ကိုကြောင်ကြီးရန်က လုံခြုံရေးအတွက် ဖေါက်ခွဲရေးတွေ မလုပ်ဘူးလား။
အဲဒီ ဆင် က ရိုးရိုးဆင်မဲ ပဲလား??
ခရုသင်းစွဲနေသေးလား နောက်ခါ သေချာကြည့်ခဲ့အူးနော်
ဓါတ်ပုံများရိုက်မိလို့ ကတော့ 
ဖိုတိုနဲ့ရှော့ ပြီး ဆင်ဖြူတော်လုပ်အုံးမလားလို့ လေ..
စာရေးကောင်းဆိုပြီး အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျို့ကိုမိုက်။
apakhabar ပါ ကိုအလင်း ဇက် ( သတ်ပုံးအမှန်)
ဘုကြည့်မခံရတာတောင် ကံကောင်းလို့ ..